Madaxwaynaha Bolivia oo afti ku “guul daraystay” - Somaliland Post
Home News Madaxwaynaha Bolivia oo afti ku “guul daraystay”
Madaxwaynaha Bolivia oo afti ku “guul daraystay”
Hargeysa(Slpost)-Madaxwaynaha dalka Bolivia, Evo Morales ayaa si dirqi ah ku waayay in uu mar afraad u tartamo madaxwaynenimada dalkaasi kaddib markii afti la qaaday, sidaas waxaa muujiyay warbixinta hor dhaca ah ee Aftida.
Haddii sharciga la badalo Morales wuxuu madaxwayne sii ahaan lahaa tan iyo 2025-ka.Taageerayaasha mucaaradka oo ku sugan qaybo ka mid ah caasimadda La Paz ayaa u dabaaldagaya natiijada aftida. Morales wuxuu ka soo jeedaa dadka asalka ah ee Aymara wuxuuna horay u ahaa nin beerta caleenta Coca, wuxuu xilka qabtay 2006.
Xilka madaxwaynenimada ee uu hadda hayo wuxuu ka dhamaanayaa sanadka 2020. Wali waa hogaamiye caan ah, dhaqaalaha dalkaasina si wayn ayuu u koray toban kii sano ee u dambeeyay.
Si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa qaba in aan la ogolaanin in madaxwayne Morales uu dalka ka taliyo 19 sano oo xiriir ah sida uu sheegayo tafatirahanaga Ameerika. In la taxadaro ayaa lagu baaqay.